ဖာနနျဒကျဈတို့ ရကျရျှဖို့ဒျတို့ကိုမလေို့ကျ..ယူနိုကျတကျအသငျး အခုလို အမှတျပေးဇယားထိပျမှာ ရပျတညျနနေိုငျအောငျလုပျပေးတဲ့ တကယျ့ကယျတငျရှငျက…. – Premier League Special
မနျယူအသငျးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့အင်ျဂါနတေု့နျးက ဝုဗျကိုအိမျကှငျးမှာ ၁-၀ နဲ့နိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဒီပှဲမှာ ဖာနနျဒကျဈရဲ့ဖနျတီးပေးမှုကနတေဈဆငျ့ ရကျရျှဖို့ဒျက နာကငျြအခြိနျပိုမှာ အရေးပါတဲ့အနိုငျဂိုးကိုသှငျးယူပေးခဲ့တာ အားလုံးသိထားပွီးဖွဈပါတယျ။
မနျယူဟာ ဒီပှဲအနိုငျကွောငျ့ အမှတျပေးဇယားမှာ ဒုတိယနရောအထိ တကျလှမျးလာလို့ ၇ နှဈကွာလကျလှတျထားရတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျခနျြပီယံဖွဈရေး မြှျောလငျ့ခကျြတှဟောလညျး ပိုမိုတောကျပလာခဲ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဖနျတီးပေးခဲ့တဲ့ ဖာနနျဒကျဈနဲ့ တဈလုံးတညျးသော သှငျးဂိုးရှငျ ရကျရျှဖို့ဒျတို့ကို ခြီးကြူးဂုဏျပွုမှုတှေ သောသောညံနခေဲ့တာပါ။
ဒါပမေယျ့ အဲဒီပှဲက မနျယူအတှကျအရေးပါခဲ့တဲ့ သူရဲကောငျးတဈဦးကိုတော့ ပရိသတျတှကေမနေ့ကွေတာပါ။ သူကတော့ နောကျခံလူ အဲရဈဘိုငျလီဘဲ ဖွဈပါတယျ။ ဘိုငျလီဟာ ဒီပှဲရဲ့အဓိကဇာတျဆောငျမဟုတျခဲ့ပမေယျ့ ပထမပိုငျးပွီးကာနီးမှာ မနျယူက ၁-၀ ရှုံးရမယျ့အခွအေနမေရောကျအောငျ စှမျးဆောငျပွခဲ့သူဖွဈပါတယျ။
သူ့ရဲ့ကာကှယျမှုသာမရှိခဲ့ရငျ မနျယူဟာ ဦးဆောငျဂိုးသှငျးခံရပွီး ၁-၀ နဲ့အရေးနိမျ့မယျ့အခွအေနရှေိခဲ့တာပါ။ ဝုဗျဟာသူသာဦးဆောငျဂိုးရခဲ့ရငျ ဒီဂိုးကိုခိုငျမာစှာကာကှယျနိုငျတဲ့ စှမျးရညျရှိလို့ မနျယူသရထေကျပိုရနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဖွဈရပျကဒီလိုပါ။
ပှဲခြိနျ ၄၄ မိနဈမှာ ဖာနနျဒကျဈတဈယောကျ ဖကျြထုတျခံလိုကျရပွီး ရူဘငျနီဗကျဈက နီတိုဆီကို ဘောလုံးပေးပို့လိုကျပါတယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာ နီတိုဟာ မကျဂှိုငျးယားနဲ့ တဈယောကျခငျြးယှဉျခဲ့ရတာဖွဈပွီး ဒီအင်ျဂလနျသားထကျ ပိုပွီးမွနျအောငျလညျး ပွေးနိုငျခဲ့တာပါ။
ဒီအခြိနျမှာ နရောလှတျကနတေဈဆငျ့ ထရာအိုရေးက ပွေးတကျလာခဲ့ပွီး နီတို ကလညျးသူ့ကစားဖျောဆီ ဘောလုံးကို ကှကျတိပေးပို့ခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဘိုငျဘီက ပါးနပျစှာနဲ့ဘဲ လမျးကွောငျးပွောငျးကာ ပွေးခဲ့လို့ ထရာအိုရေး ဆီမရောကျခငျမှာ ဘောလုံးကိုကွားဖွတျ ဟနျ့တားနိုငျခဲ့ပါတယျ။ သူသာမတားနိုငျခဲ့ရငျ ထရာအိုရေးဟာ ဒီဂီယာနဲ့ တဈဦးခငျြးရငျဆိုငျတှမှေ့ာ ဖွဈပါတယျ။
ဘိုငျလီရဲ့ အဲဒီလှုပျရှားမှုဟာ မကျဂှိုငျးယားကိုရော ဝမျဘဈဆာကာ ကိုပါဖွညျ့ပေးနိုငျခဲ့လို့ key defensive contribution (အရေးပါလှတဲ့ ခံစဈပိုငျးစှမျးဆောငျရညျ) ဖွဈခဲ့တယျလို့လညျး မှတျခကျြပွုခဲ့ကွပါတယျ။
ဒါကွောငျ့လညျး အသကျ ၂၆ နှဈရှိတဲ့ အိုငျဗရီကို့ဈလကျရှေးစငျ ဘိုငျလီရဲ့ လှုပျရှားမှုဟာ တကယျ့ကို အံမခနျးဖွဈခဲ့တယျလို့ ဆိုကွတာပါ။ သူသာကွံ့ခိုငျမှုပွညျ့နမေယျဆိုရငျ မကျဂှိုငျးယားရဲ့ ဗဟိုခံစဈ တှဲဖကျက လငျဒီလော့ဖျမဖွဈသငျ့ဘဲ မွနျဆနျစှာလှုပျရှားနိုငျတဲ့ ဘိုငျလီသာ ဖွဈသငျ့တယျလို့လညျး မှတျခကျြပွုနကွေပါတယျ။
ဖာနန်ဒက်စ်တို့ ရက်ရ်ှဖို့ဒ်တို့ကိုမေ့လိုက်..ယူနိုက်တက်အသင်း အခုလို အမှတ်ပေးဇယားထိပ်မှာ ရပ်တည်နေနိုင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ တကယ့်ကယ်တင်ရှင်က….
မန်ယူအသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့တုန်းက ဝုဗ်ကိုအိမ်ကွင်းမှာ ၁-၀ နဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ ဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့ဖန်တီးပေးမှုကနေတစ်ဆင့် ရက်ရ်ှဖို့ဒ်က နာကျင်အချိန်ပိုမှာ အရေးပါတဲ့အနိုင်ဂိုးကိုသွင်းယူပေးခဲ့တာ အားလုံးသိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မန်ယူဟာ ဒီပွဲအနိုင်ကြောင့် အမှတ်ပေးဇယားမှာ ဒုတိယနေရာအထိ တက်လှမ်းလာလို့ ၇ နှစ်ကြာလက်လွှတ်ထားရတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဖြစ်ရေး မျှော်လင့်ချက်တွေဟာလည်း ပိုမိုတောက်ပလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ ဖာနန်ဒက်စ်နဲ့ တစ်လုံးတည်းသော သွင်းဂိုးရှင် ရက်ရ်ှဖို့ဒ်တို့ကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုမှုတွေ သောသောညံနေခဲ့တာပါ။
ဒါပေမယ့် အဲဒီပွဲက မန်ယူအတွက်အရေးပါခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းတစ်ဦးကိုတော့ ပရိသတ်တွေကမေ့နေကြတာပါ။ သူကတော့ နောက်ခံလူ အဲရစ်ဘိုင်လီဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘိုင်လီဟာ ဒီပွဲရဲ့အဓိကဇာတ်ဆောင်မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် ပထမပိုင်းပြီးကာနီးမှာ မန်ယူက ၁-၀ ရှုံးရမယ့်အခြေအနေမရောက်အောင် စွမ်းဆောင်ပြခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ကာကွယ်မှုသာမရှိခဲ့ရင် မန်ယူဟာ ဦးဆောင်ဂိုးသွင်းခံရပြီး ၁-၀ နဲ့အရေးနိမ့်မယ့်အခြေအနေရှိခဲ့တာပါ။ ဝုဗ်ဟာသူသာဦးဆောင်ဂိုးရခဲ့ရင် ဒီဂိုးကိုခိုင်မာစွာကာကွယ်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ရှိလို့ မန်ယူသရေထက်ပိုရနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖြစ်ရပ်ကဒီလိုပါ။
ပွဲချိန် ၄၄ မိနစ်မှာ ဖာနန်ဒက်စ်တစ်ယောက် ဖျက်ထုတ်ခံလိုက်ရပြီး ရူဘင်နီဗက်စ်က နီတိုဆီကို ဘောလုံးပေးပို့လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ နီတိုဟာ မက်ဂွိုင်းယားနဲ့ တစ်ယောက်ချင်းယှဉ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး ဒီအင်္ဂလန်သားထက် ပိုပြီးမြန်အောင်လည်း ပြေးနိုင်ခဲ့တာပါ။ ဒီအချိန်မှာ နေရာလွတ်ကနေတစ်ဆင့် ထရာအိုရေးက ပြေးတက်လာခဲ့ပြီး နီတို ကလည်းသူ့ကစားဖော်ဆီ ဘောလုံးကို ကွက်တိပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘိုင်ဘီက ပါးနပ်စွာနဲ့ဘဲ လမ်းကြောင်းပြောင်းကာ ပြေးခဲ့လို့ ထရာအိုရေး ဆီမရောက်ခင်မှာ ဘောလုံးကိုကြားဖြတ် ဟန့်တားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူသာမတားနိုင်ခဲ့ရင် ထရာအိုရေးဟာ ဒီဂီယာနဲ့ တစ်ဦးချင်းရင်ဆိုင်တွေ့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘိုင်လီရဲ့ အဲဒီလှုပ်ရှားမှုဟာ မက်ဂွိုင်းယားကိုရော ဝမ်ဘစ်ဆာကာ ကိုပါဖြည့်ပေးနိုင်ခဲ့လို့ key defensive contribution (အရေးပါလှတဲ့ ခံစစ်ပိုင်းစွမ်းဆောင်ရည်) ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လည်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း အသက် ၂၆ နှစ်ရှိတဲ့ အိုင်ဗရီကို့စ်လက်ရွေးစင် ဘိုင်လီရဲ့ လှုပ်ရှားမှုဟာ တကယ့်ကို အံမခန်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုကြတာပါ။ သူသာကြံ့ခိုင်မှုပြည့်နေမယ်ဆိုရင် မက်ဂွိုင်းယားရဲ့ ဗဟိုခံစစ် တွဲဖက်က လင်ဒီလော့ဖ်မဖြစ်သင့်ဘဲ မြန်ဆန်စွာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ ဘိုင်လီသာ ဖြစ်သင့်တယ်လို့လည်း မှတ်ချက်ပြုနေကြပါတယ်။